ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဟွန်ဒါ စီအာ-ဗီ များ | ဟွန်ဒါ စီအာ-ဗီ ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Lks 680 ညှိနှိုင်း
Black Honda CR-V 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလ...
Black Honda CR-V 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် RN1-1003526) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ A...
Silver Honda CR-V 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Pearl white Honda CR-V 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Silver Honda CR-V 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Dark Blue Honda CR-V 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Honda CR-V 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Lks 635 ညှိနှိုင်း
Pearl white Honda CR-V 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Honda CR-V 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Black Honda CR-V 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Pearl White Honda CR-V 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Black Honda CR-V 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl White Honda CR-V 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Lks 690 ညှိနှိုင်း
Pearl white Honda CR-V 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေ...
Green Honda CR-V 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Silver Honda CR-V 1998 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Black Honda CR-V 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလ...
Silver Toyota CR-V 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Honda CR-V 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Lks 670 ညှိနှိုင်း
Silver Honda CR-V 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl White Honda CR-V 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Grey Honda CR-V 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Black Honda CR-V 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
SUV အသေးစားထဲက နာမည်ရနေတဲ့ စီအာဗီများ
ဟွန်ဒါ စီအာဗီများ ဟာ တိုယိုတာ ရတ်ဖိုး ကားနဲ့ ပုံစံ ဆင်မူကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ လူကြိုက်များကြတဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်မျိုးပါပဲ။ ကားကိုယ်ထည် ကျစ်ကျစ် လစ်လစ် ရှိမူကို ဦးဆောင်ထားတဲ့ SUV ကား တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းမှာ ဟွန်ဒါ ဘရန်တွေရဲ့ ဆန်းသစ်မူကို လိုက်ပါ တပ်ဆင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
လူ (၅) ယောက် စီးနင်းနိင်မှာ ဖြစ်ပြီး အော်တို မန်နျူယယ် ရွေးနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ကား အနောက်ဖက် ထူးခြားချက်က မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုး၊ အချို့သော တိုယိုတာ လန်ခရုဇာ ကဲ့သို့ ကားတွေလို ဘီးဖုံး ကာဗာနဲ့ တပ်ဆင်လျက် ပါရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှတော့ ဒုတိယမျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၆ လောက်ကို ထုတ်တဲ့ ဟွန်ဒါ စီအာဗီကို အ၀ယ်များ အမှာများပါတယ်.။ သူထက် မော်ဒယ် အမြင့်ဆို ဈေးက နှစ်ဆလောက် ကွာသွားမှာ ဖြစ်လို့ စလစ်ကပ် စီအာဗီတွေကိုသာ ၀ယ်ကြပါတယ်။
အင်ဂျင်ပါဝါ သင့်လျော်ပြီး SUV တို့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း ၂.၀ လီတာ၊ ၂.၂ လီတာ၊ ၂.၄ လောက် ကို ပေးထားပါတယ်။ ဟွန်ဒါ စီအာဗီထဲမှာမှ 20G , ZX, ZL, စတဲ့ ဂရိတ်တွေကို ရွေးနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စီအာ ဇစ် လည်ှးရှိပါတယ်။ စီအာဇစ်ကတော့ ဟိုင်းဘရစ် လျှပ်စစ် စပေါ့ပ် ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကတော့ သေးပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၁.၅ လီတာ လာပါတယ်။ မန်နျူးယယ် ၊ အော်တို လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထုတ် ၂၄၀၀စီစီ ၄ ဆလင်ဒါရှိ ကားတွေဆို မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင် တစ်ဂါလံ ၂၀/၂၇ မိုင်နှုန်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဟွန်ဒါ စီဗစ်ရဲ့ နောက်ဆုံး မျိုးဆက်မှာ အခြေခံကာ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ အသေးစား SUV ကား အကောင်းဆုံး ဆုတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရရှိခဲ့တာက ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ် စီအာဗီတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို နှစ်ထုတ်တွေမှာ အင်ဂျင် ၂.၀ လီတာကနေ စပြီး ကြားထဲမှာ ၂.၂ လီတာ၊ ၂.၄ လီတာတို့ပါ ထွက်ပါတယ်။ အော်တို မန်နျူးယယ် ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင် ၂.၂ လီတာမှာ ဒီဇယ် လာပါတယ်။ ၂၀၀၅ မော်ဒယ် ဟွန်ဒါ စီအာဗီက အချင်း (၁၆) လက်မ ဘီးနဲ့လာပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင် မော်ဒယ်တွေကတော့ ၁၅ လက်မ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့မီးတွေနဲ့ အနောက် မီးတွေကိုလည်း ပိုပြီး ကြည်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ၂၀၁၀ မှာ တစ်ခါ ထပ်ပြီး ပုံစံ ချိန်းပါတယ် ။ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ချိန်းတဲ့ အပြင် ပါဝါ မောင်းနှင်မူတွေလည်း ချိန်းပါတယ်။ ထိုင်ခုံတွေလည်း ဖိုင်ဘရစ်တွေကို ချိန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၀ မှာတော့ အရင် မော်ဒယ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ ပြောင်းလဲမူတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေး အတွက် စီအာဗီ မော်ဒယ်တွေ အားလုံးမှာ အနောက် ကင်မရာတွေနဲ့ လာပါတယ်။
ဟွန်ဒါ စီအာဗီတွေဟာ အ၇ွယ်အစား သေးငယ်ပြီး မောင်းနှင်လို့ ကောင်းတဲ့ ကားအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး လူ(၅) ယောက်စီး ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကားရဲ့ အနောက်ဖုံးက အစပြောင်းလဲမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ မော်ဒယ်လောက်ဆို တိုယိုတာ ဟာရီယာနဲ့ တော်တော်တူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဇယ်ရရှိပြီး ဆီစားကတော့ မြို့တွင်းမြို့ပြင် တစ်ဂါလံ မိုင် ၂၀ ကျော်ရပါတယ်။
စလစ်ကပ်ကား များမှာဆိုရင် အပြီးအစီးကို ကျပ် သိန်း ၂၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စလစ်ဈေး ၈၀ သိန်းကို ပေါင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ စီအာဗီ အနက်တွေဆို မော်ဒယ် အမြင့်ကား တစ်ချို့ရဲ့ ဈေးနီးပါး ပေါက်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ဆိုရင် တော့ ကျပ်သိန်း ၄၅၀ လောက် ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ကားဒီဇိုင်းက တော်တော်ကို ပြောင်းသွာတာမို့ ထင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်လောက်ကို ကျပ် သိန်း (၂၀၀) လောက် ၀န်းကျင်ပေးပြီး စီးနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စီအာဗီတွေကို ကျပ်သိန်း ၁၈၀ နီးပါးလောက်မှာ ၂၀၀၂ မော်ဒယ် ၀န်းကျင်ကို ရနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါဟာ စီအာဗီ ကားတွေကို သူရဲ့ စတိုင်ကျမှုနဲ့ မော်ဒယ် ခေတ်ဆန်မှုကို ပေးစွမ်းထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အတွင်းဖက် အခန်းတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကား စီယာတိုင် ထိန်းချုပ်မှုတွေကို တိုးတက်လာစေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဘရိတ်တွေကိုပါ ထားရှိ ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ၂၄၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ဆိုရင် မြင်းကောင်ရေအား ၁၈၄ ရှိပါတယ်။ စီဗီတီ ဂီယာဘောက်စ်တွေပါ ပါရှိလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကားမော်ဒယ်တွေ အားလုံးမှာလည်း လေးဘီးမောင်းစနစ်ကို ရွေးချယ်စရာ စနစ်တစ်ခု အနေနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။